Sakafo sy fonenan’ny hazandranomasina : mila harovana ny ahidranomasina | NewsMada
Sakafo sy fonenan’ny hazandranomasina : mila harovana ny ahidranomasina
Manentana ny olona hiaro ny ahidranomasina izay sady zavamaniry ataon’ny karazam-biby maro sakafo sy toeram-pitobian’ny trondro, makamba… ny Conservation centrée sur la communauté (C3). Tafiditra amin’ny tetikasa fampahafantarana ny mponina ho fiarovana ny harena an-dranomasina ny hetsika ary vatsin’ny Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) vola. Ho fanombohana ny asa eny ifotony, nisafidy toerana roa ao Ambodivahibe, ao atsinanan’Antsiranana, ny ekipa hamolavola sarin-tany maneho ny toerana mbola ahitana ahidranomasina, ny volana avrily lasa teo. Faritra telo no niasana: ao amin’ny kaominina Ramena Ambolamena, ny Nosy Mirahavay ary Antogoanaomby. Tao Ankirikiriky kosa ho an’ny kaominina Mahavanona. Nialoha ny fanatanterahana ny sarin-tany, niofana momba ny fampafantarana ny ahidranomasina sy ireo karazany misy amin’ny ankapobeny ny ekipa. Teo koa ny fanaovana ny sarin-tany amin’ny Seagrass Watch.
Ny lamboara sy ny lambondriaka izay samy efa arovana dia samy miraoka ahidranomasina, ankoatra ny zana-trondro sy ny karazam-biby maro hafa. “Rehefa voaaro ny ahidranomasina, voaaro koa ny fiveloman’ny mpanjono satria mahita sakafo hatrany ary afaka mitombo ny hazandranomasina maro”, hoy ny tomponandraikitry ny C3, Rakotoarimino Lalaharisoa.
Rehefa vita ny sarin-tany, hiroso amin’ny fanaraha-maso sy ny fanohizana ny fanentanana ny mponina ny ekipa rehetra. Anisan’ny manimba ny zavamaniry any anaty ranomasina koa ny fampiasana ny fitaovana toy ny milina entina manjono ka tokony hojerena manokana ny kojakoja ampiasain’ny olona sy ny lanjan’ny voka-dranomasina azo trandrahina tsy hahalany tamingana ny harena an-dranomasina.